Puntland oo xoolo lala soo hamaayay ka daweysay xanuunno dilayay
Puntland oo xoolo lala soo hamaayay ka daweysay xanuunno dilayay
Photo | Sawirka waxaan ka helnay wasaaradda xannaanada xoolaha Puntland
Radio Ergo 09 February, 2017 GAROWE
(ERGO) - Cali Saciid Cabdi oo ka mid ah xoolo-dhaqatada u hayaamay xeebaha gobolka Sanaag ee uu roobka ka da’ay ayaa sheegay in toddobaadkii hore loo daweeyay 40 ari ah oo xoolihiisa uga haray oo ay hayeen cudurro ka dhashay abaarta. Wasaaradda Xannaannada Xoolaha Puntland ayaa saddexdii bishan soo gabagabeysay olole ay ku daweyneyso xoolaha lala soo hayaamay ee ku sugan gobolka Nugaal iyo xeebaha Bari iyo Sanaag oo roob uu ka da’ay dhamaadkii bishii Diseembar ee sanadkii hore. Ololahaas wuxuu socday toban maalmood.
Wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in muddo bil ah oo uu deegaankaas joogay ay cudurro uga dhinteen ilaa 30 neef oo ari ahaa. Hase yeeshee wuxuu ku faraxsan yahay in loo daweeyay tirada yar ee uu haysto. “Waxaa arigayga laga daweeyay cudurro ay ku jiraan caddo, jadeeco, dhabiijo iyo xanuunno kale oo nagu cusub oo uu arigu la caaroonayay,” ayuu yiri.
Miyiga Ceelaayo ee uu Cali joogo oo Boosaaso u jira 70 km wuxuu ka mid yahay dooxada Macag oo ay xoolo-dhaqato badan isugu yimaadeen.
Agaasimaha wasaaradda xannaannada xoolaha ee maamulka Puntland, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in ololaha oo ay ka fuliyeen 96 goobood oo saddexdaas gobol ah lagu daweeyay 257,962 neef oo isugu jira ari iyo geel. Xoolahaas waxaa lahaa 3,042 qoys oo ka soo barakacay abaarta qeybo ka tirsan Bari, Nugaal, Sool, Sanaag, Togdheer, Mudug, Galgaduud iyo dhanka dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Cali Saciid oo ka soo barakacay miyiga degmada Dhahar ee gobolka Sanaag oo ay roob ugu dambeysay dhamaadkii sanadkii 2015 ayaa muddadaas ay abaartu haysay waxaa daaq la’aanta iyo biyo-yarida uga dhintay ari ka badan 300 oo neef.
Agaasimaha ayaa xusay ujeeddada ay kooxaha caafimaadka ugu direen goobahaas inay ahayd in laga hortago xanuunnada ku dhex faafaya xoolaha sida caalka, kuwa ay sababto shilinta iyo dhabiijada oo xilliyadan oo kale ku dhaca ariga. Wuxuu intaa ku daray inay dhiig ka soo qaadeen xoolaha qaar si loo baaro inay jiraan cudurro cusub oo ka dhashay abaarta.
“Waxaan daweynay xoolaha aan is niri waxay u baahan yihiin badbaadin degdeg ah oo halis ugu jiray cudurrada,” ayuu yiri agaasimaha. Wuxuu caddeeyay in ololahan oo ay ka caawisay hay’adda Cuntada iyo Beeraha (FAO) uu koobnaa, balse ay qorsheynayaan in dhammaadka bishan ay sameeyaan mid ballaaran oo 40 maalmood socon doona, isla markaana daweyn iyo tallaal lagu gaarsiin doono malaayiin neef. Ololahaas waxay ka fulin doonaan dhulka roobsaday ee xoolaha la isugu keenay iyo gobollada kale ee Puntland ee ay dadku awoodi waayeen inay ka hayaamaan.
Daahir Maxamed Jaamac oo ah 40 jir ku haya miyiga Xuubabbeys oo hoostaga degmada Isku-shuban ee gobolka Bari 300 ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in dawooyinka la gaarsiiyay xilli ay baahi weyn u qabeen oo xoolaha ay uga le’anayeen cudurro.
“Waxaan filayaa in xoolaha mar kasta iska bakhtiyaya ay sidan dhaami doonaan,” ayuu telefoonka noogu sheegay. Daahir oo ka soo hayaamay miyiga degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxaa xoolihiisa laga daweeyay sambabka iyo caalka. Saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa ay cudurradaas ka dileen 50 ari ah oo uu u naq-geeyay halkaas markii uu da’ay roobkii deyrta.
Daahir oo abaarta kahor lahaa 200 oo ari ah, waxaa hadda u hartay 100 neef. Intii kale waxa ay uga dhinteen abaarta iyo cudurro isbiirsaday. Xoolaha kale ee meesha uu ku hayo waxaa leh qoysas awoodi waayay inay kasoo barakacaan miyiga uu ka yimid, kuwaas oo kusoo darsaday xoolaha intii awoodi kartay inay socoto.
Hay’adda Maareynta Musiibooyinka ee Puntland ayaa shan milyan oo neef oo u badan ari ku qiyaastay xoolaha la geeyay deegaannada uu roobka ka da’ay ee Bari iyo Sanaag.